🥇 ukubalwa kwezikweletu
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 339
Ividiyo yokubalwa kwemali yezikweletu
Oda ukubalwa kwezimali kokusebenza kwesikweletu
Ukuthengiselana kwemali mboleko kuqoshwa ngokuzenzakalela ku-USU Software, okusho ukuthi noma yikuphi ukuthengiselana kwemali mboleko kuzovezwa ngokushesha ku-akhawunti nakuwo wonke amadokhumende ahlobene nokubolekwa kwemali, kufaka phakathi inkomba yombala, enikezwa ohlelweni lokubala oluzenzakalelayo ukuqinisekisa ukulawulwa kokubuka kwakho konke ukusebenza okwenzeka lapho ukhokhela imalimboleko. Yonke imisebenzi yenziwa ngaphandle kokubamba iqhaza kwabasebenzi, yingakho ukuvunyelwa 'kokubalwa kwemali okuzenzakalelayo', okwenza ukubalwa kwezimali okungokoqobo kungasebenzi nje kuphela, ngoba ijubane lanoma yikuphi ukusebenza kuyingxenyana yomzuzwana, kungakhathalekile inani ledatha ukucubungula, kepha kusebenza ngempumelelo ngenxa yokuphelela kwedatha yokumboza ezorekhodwa. Ngaphezu kwalokho, nge-accounting ezenzakalelayo, zonke izibalo nazo zenziwa ngokuzenzakalela, kufaka phakathi ukubalwa kwenzalo nokuqoqwa kwenhlawulo, ukubalwa kabusha kwezinkokhelo lapho isilinganiso samanje sokushintshaniswa kwemali yakwamanye amazwe siguquka uma imali mboleko ikhishwe ngemali yakwamanye amazwe, nokuthengiselana okubolekwe imali kwenziwa ngokulingana kukazwelonke.
Ukubalwa kwemali kokusebenza kwesikweletu ngemali yakwamanye amazwe kwenziwa ngokuya ngemigomo efanayo neyemalimboleko ejwayelekile, kepha, njengomthetho, amaqembu avumelana ngokomthetho wokuthengiselana ukubala kabusha izinkokhelo lapho isilinganiso samanje sokushintshisana semali yakwamanye amazwe lapho le mali mboleko kukhishwe izinguquko, uma imali yakwamanye amazwe ishintsha kakhulu. Kumele kuqashelwe ukuthi isikweletu semali yakwamanye amazwe, uma singesesikhashana, sinenzuzo enkulu kunesimalimboleko semali kazwelonke ngoba ngokungabi nokushintshashintsha kwezinga lokushintshisana lwemali yakwamanye amazwe, ukusebenza kwalezo zimali mboleko kudinga ukukhokhelwa okuphansi kunasesimweni esikhona yemalimboleko ngaphansi kwezimo ezifanayo emalini yendawo. Ukucushwa kokubalwa kwemali kwezikweleti kusabalalisa ngokuzenzakalela izimali mboleko ‘zangaphandle’ ngezinhlobo, ezinqunywa ngezinhloso zemalimboleko yemali yakwamanye amazwe, kubabolekisi, izivumelwano, futhi ngokuzimela kuqhuba zonke izinhlobo zokusebenza ezinikezwa izikweletu zesevisi ngemali yakwamanye amazwe. Imisebenzi yayo ifaka ukulawula ukwabiwa okufanele kwezinsizakusebenza zesikweletu, ukugcwaliseka ngesikhathi kwezibopho kubo, kanye nokuhambisana nezidingo zomthetho wokushintshaniswa kwamazwe angaphandle.
Ukuhlelwa kokubalwa kwemali kokusebenza kwesikweletu ngemali yakwamanye amazwe kuzocubungula ngokuzenzakalela umehluko wesilinganiso sokushintshana kuzinkokhelo zenzalo, umehluko wesilinganiso sokushintshana ekukhokheni isikweletu esiyinhloko ngosuku lokukhokha, ngokuya ngohlelo olubekelwe zona, nazo yenziwe ngokuzimela ngokucushwa. Ukulawulwa kwezimali zamazwe angaphandle, ngokunembile, ukuqapha amanani abo wamanje, uhlelo lokubala oluzenzakalelayo lwenzeka ngokuzenzakalela futhi, uma luguquka kakhulu, luqhuba ngokushesha ukusebenza ukubala kabusha izinkokhelo ngokuya ngesilinganiso esisha, ukwazisa amakhasimende ngalokhu ngokuzenzekelayo ngalabo oxhumana nabo yethulwe ku-database, uma isoftware ifakiwe esikhungweni sezezimali.
Ukubalwa kwemali kwezimali zakwamanye amazwe kwenziwa lapho kukhishwa imali yesikweletu, ngesikhathi sokukhokha okulandelayo noma lapho kubuyiselwa. Ukuphendula konke ukuthengiselana, kubhaliswe kumarejista kagesi kwazise uhlelo lugcina ukulawula okuqinile kwizinsizakusebenza zezezimali, lakha amafomu akhethekile abhala ukuthengiselana, okwenziwe ngesikhathi sokubika ngemininingwane eningiliziwe ngayinye yazo, kulungiswa izinsuku, izizathu , ozakwabo, kanye nenombolo yabantu ababhekele lo msebenzi.
Ukulondolozwa kwezinsizakusebenza, okubaluleke kakhulu kuzo isikhathi nezimali, kungumsebenzi wohlelo, ngakho-ke, lwenza kube lula zonke izinqubo ngangokunokwenzeka futhi, ngalokho, luzisheshisa, lushiye abasebenzi benomthwalo owodwa kuphela - ukungena kwedatha, okuyisisekelo futhi okwamanje. Ukurekhoda imininingwane etholwe kubasebenzisi, ukuthembeka nokusebenza kwayo, kunikezwa amaphephabhuku e-elektroniki ngamanye, lapho abasebenzi bethumela khona imiyalezo ngezenzo zabo abazenzileyo ekwenzeni imisebenzi. Ngokuya ngalolu lwazi, uhlelo oluzenzakalelayo lubala kabusha izinkomba eziveza isimo samanje sezinqubo zomsebenzi. Ngokuya ngezinkomba ezibuyekeziwe, izinqumo zokuphatha zenziwa ukuqhubeka nomsebenzi ngemodi efanayo noma ukulungisa noma iyiphi inqubo uma ukuphambuka kwenkomba yangempela kusuka kuleyo ehleliwe kukhulu ngokwanele. Ngakho-ke, umsebenzi wokusebenza kwabasebenzi ubalulekile, ohlolwa yisistimu yokubalwa kwezimali lapho kubalwa iholo elincane labasebenzisi ekupheleni kwesikhathi sokubika.
Uhlelo ngokwalo lubala umholo wanyanga zonke wazo zonke izisebenzi, kucatshangelwa ikhwalithi yemininingwane ethunyelwe ezingodo zomsebenzi, ngakho-ke abasebenzi banentshisekelo ekwengezeni okufika ngesikhathi kwedatha nokwethembeka kwabo. Ukulawulwa kolwazi oluvela kubasebenzisi kwenziwa ngabaphathi kanye nohlelo uqobo, luphindaphinda le misebenzi, ngoba banezindlela ezahlukahlukene zokuhlola, ngaleyo ndlela behambisana. Abaphathi bahlola izingodo zabasebenzi ukuthi ziyahambisana yini nesimo samanje sokuhamba komsebenzi, abasisebenzisela umsebenzi wokucwaningwa kwamabhuku, okhombisa ngqo ukuthi yiluphi ulwazi olungezwe ohlelweni kusukela kusheke lokugcina futhi, ngalokho, luyasheshisa. Uhlelo lokubala ukusebenza kwezikweletu lugcina ukulawula izinkomba, kusungula ukuzithoba phakathi kwazo, okungafaki amaphutha.
Uhlelo lwe-accounting lokusebenza kwesikweletu lukhiqiza imininingwane eminingi, kufaka phakathi ulayini womkhiqizo, i-CRM eseceleni kwamakhasimende, i-database yezikweletu, i-database yemibhalo, isisekelo somsebenzisi, kanye ne-database yabathintekayo. I-CRM iqukethe umlando wokuxhumana neklayenti ngalinye kusukela ngesikhathi sokubhaliswa, kufaka phakathi izingcingo, imihlangano, ama-imeyili, imibhalo yezindaba, imibhalo nezithombe. Idathabheyisi yesikweletu iqukethe umlando wemalimboleko, kufaka phakathi usuku lokukhishwa, amanani, amanani wenzalo, uhlelo lokukhokha, ukuqoqwa kwenhlawulo, ukwakheka kwezikweletu, kanye nokukhokha isikweletu. Ukubalwa kwemali okwenziwayo kusizindalwazi sesikweletu ngeke kuthathe isikhathi esiningi njengoba uhlelo ngalunye lunesimo nombala kulo, ukuze ukwazi ukubheka isimo sayo samanje ngaphandle kokuvula imibhalo. Uhlelo lusekela ngokukhethekile ukukhonjiswa kombala kwezinkomba nezimo ukuze konge isikhathi sabasebenzisi. Umbala ukhombisa izinga lokufeza imiphumela oyifunayo.
Uhlelo lokubalwa kwemali lwezikweletu lusekela ngokukhethekile ukuhlanganiswa kwamafomu kagesi. Zinefomethi efanayo yokugcwalisa, ukusatshalaliswa kolwazi okufanayo, namathuluzi okuphatha. Uhlelo lunikeza ukwakheka komuntu siqu kwendawo yokusebenza yomsebenzisi - izinketho ezingaphezu kuka-50 zokwakheka kwesixhumi esibonakalayo futhi zingakhethwa ngokuskrola. Abasebenzisi banokungena ngemvume komuntu siqu namaphasiwedi okuphepha kubo, okunikeza amafomu kagesi womuntu siqu kanye nenani lemininingwane edingekayo yolwazi. Ukungena ngemvume kwakha indawo yokusebenza ehlukile - indawo enesibopho somuntu siqu, lapho yonke idatha yomsebenzisi imakwa khona ngokungena ngemvume, okulula lapho usesha umuntu ongaqondile. I-interface yabasebenzisi abaningi isiza ukuxazulula inkinga yokwabelana lapho abasebenzisi benza umsebenzi kanyekanye njengoba ukungqubuzana kokugcina idatha kuqedwa. Uhlelo luzimela ngokuzimela yonke imibhalo ekhona, okubandakanya izitatimende zezimali, okuphoqelekile kumlawuli, iphakethe eligcwele lemibhalo ukuthola isikweletu.
Lolu hlelo lugcina imininingwane eqhubekayo yezibalo kuzo zonke izinkomba zokusebenza, ezenza ukuthi kube nokuhleleka okuhle kwesikhathi esizayo, ukubikezela imiphumela. Ngokuya ngezibalo zezibalo, zonke izinhlobo zemisebenzi ziyahlaziywa, kufaka phakathi ukuhlolwa kokusebenza kwabasebenzi, okwenziwa ngamakhasimende, kanye nokukhiqizwa kwezindawo zokumaketha. Ukuhlaziywa kwazo zonke izinhlobo zemisebenzi, okunikezwe ekupheleni kwesikhathi ngasinye sokubika, kwenza kube lula ukulungisa izinqubo ngesikhathi esifanele, nokwenza ngcono ukuthengiselana kwezezimali. Uhlelo lusekela ukuxhumana okuphumelelayo - ngaphakathi nangaphandle, esimweni sokuqala amawindi e-pop-up, ekuxhumaneni kwe-elekthronikhi kwesibili - i-imeyili, iSMS, iViber, nezingcingo zezwi.
Izinhlangano zezimali ezincane
ukubalwa kwezimali nokubikwa kwesikhungo esikweletwa
ukubalwa kwezikweletu zezikweletu
ukubalwa kwama-credit broker
ukubalwa kwamabhizinisi ezikweletu
ukubalwa kwemali yemalimboleko
ukubala inzalo eyeqiwe yimalimboleko
ukubalwa kwamakhredithi wesikhathi esifushane nemalimboleko
ukubalwa kwemali mboleko yesikhashana
ukubalwa kwezimali ezikhungweni zezikweletu
ukubalwa kwezimali ezikhungweni zezezimali nezikweletu
ukubalwa kwezimali kuma-MFIs
ukubalwa kwezimali ezinhlanganweni zezimali ezincane
ukubalwa kwenzalo etholakele emalimboleko
ukubalwa kwemali mboleko yasebhange
ukubalwa kwamakhasimende kuma-MFIs
ukubalwa kwamakhasimende ezikhungo zezikweletu
ukubalwa kwezikweletu nokubolekwa kwemali
ukubalwa kwezimali kokubambisana kwezikweletu
ukubalwa kwezindleko zeziko lesikweletu
ukubalwa kwezindleko zezimalimboleko nokubolekwa
ukubalwa kwezindleko kwizimalimboleko namakhredithi
ukubalwa kwenhlawulo kwizimalimboleko
ukubalwa kwemali mboleko enikeziwe
ukubalwa kwezimali kokunikezwa izikweletu
ukubalwa kwemali engenayo yezikhungo zezikweletu
ukubalwa kwenzalo emalimboleko ebhange
ukubalwa kwamakhredithi akhishiwe nemalimboleko
ukubalwa kwemali ebolekiwe ekhishiwe
ukubalwa kwemali mboleko
ukubalwa kwemali mboleko nezezimali
ukubalwa kwemali mboleko nokusebenza kwayo
ukubalwa kwemali mboleko kuma-MFIs
ukubalwa kwezimali zemalimboleko yabantu ngabanye
ukubalwa kwemali ekhokhelwa imalimboleko
ukubalwa kwekhomishini yemalimboleko
ukubalwa kwezindleko zemalimboleko
ukubalwa kwemali ekhokhwayo yemalimboleko
ukubalwa kwemali mboleko yesikhathi eside
ukubalwa kwenhlangano encane
ukubalwa kwezimali ezincane
ukubalwa kwemali ekhokhwayo kwizimalimboleko
ukubalwa kwezimali ezitholakele kanye nokubolekwa kwemali
ukubalwa kwezindawo zokuhlala kumakhredithi kanye nemalimboleko
ukubalwa kwezindawo zokuhlala emalimboleko
Inqubo yokubala imali yezikweletu
Uhlelo lwe-accounting lwama-MFIs
uhlelo lokubalwa kwezimali ezikhungweni zezikweletu
uhlelo lokuphendula kuma-MFIs
uhlelo lokubalwa kwezikweletu
uhlelo lokubala imali lokukhokhwa kwemali mboleko
ukuhlaziywa nokubalwa kwezikweletu
ukuhlaziywa kwamabhuku ezimali kanye nokubolekwa kwemali
uhlelo lokusebenza lokubalwa kwezikhungo zezikweletu
uhlelo lokusebenza lokubalwa kwemali mboleko
uhlelo lokusebenza lwezikhungo zezikweletu
uhlelo lokusebenza lwama-MFIs
uhlelo lokusebenza lwezinhlangano ezincane
uhlelo lokusebenza lwama-microloans
ezishintshayo izinhlangano ezincane zezimali
ukuzenzakalela kokubalwa kwemali kuma-MFIs
ukuzenzakalela kokubalwa kwezikweletu
okuzenzakalelayo kwezikhungo zezikweletu
ukuzenzekelayo kwama-microloans accounting
Uhlelo lwekhompyutha lwamakhredithi
Uhlelo lwekhompyutha lwezikhungo zezikweletu
Uhlelo lwekhompyutha lwama-MFIs
Uhlelo lwekhompyutha lwezinhlangano zezimali ezincane
Uhlelo lwekhompyutha lwe-microloans accounting
Lawula izinhlangano ezincane
Ukulawulwa kwamakhredithi nokubolekwa kwemali
Ukulawulwa kokubambisana kwezikweletu
Ukulawulwa kwezikhungo zezikweletu
Ukulawulwa kwezinhlangano zezimali ezincane
Lawula ukukhokhelwa kwemali mboleko
Lawula ekutholeni izinkokhelo zemalimboleko
I-CRM yokubalwa kwamakhredithi
I-CRM yokubalwa kwemali mboleko
I-CRM yabathengi bama-credit
I-CRM yezikhungo zezikweletu
I-CRM yezinhlangano zezimali ezincane
I-CRM yokubalwa kwama-microloans
Uhlelo lokuhlonza ikhasimende lesikhungo sezikweletu
Ukubalwa kwezezimali kwamakhredithi nokubolekwa kwemali
Ukulawulwa kwangaphakathi kwesikhungo sezikweletu
Ukulawulwa kwangaphakathi kwama-MFIs
Imithetho yokulawulwa kwangaphakathi yezikhungo zezikweletu
Imithetho yokulawulwa kwangaphakathi kwama-MFIs
Ukuphathwa enhlanganweni yezezimali neyezikweletu
Ukuphathwa kwemali mboleko yasebhange
Ukuphathwa kokubambisana kwezikweletu
Ukuphathwa kwamabhizinisi wesikweletu
Ukuphathwa kwezikhungo zezikweletu
Ukuphathwa kwezezimali namakhredithi
Ukuphathwa kwemalimboleko namakhredithi
Ukuphathwa kwenhlangano encane
Ukuphathwa kwenhlangano yemali encane
Uhlelo Lokuphatha lwama-MFIs
Uhlelo lwe-Microfinance accounting
Ukuzenzekelayo kwemali encane
Uhlelo lwezimali ezincane
Uhlelo oluku-inthanethi lwama-MFIs
Ukwenza ngcono ama-MFIs
Inhlangano nenqubo yokubalwa kwemali yezikhungo zezikweletu
Inhlangano nokuphathwa kwezezimali namakhredithi
Inhlangano yokubalwa kwezimali kwamakhredithi
Inhlangano yokubalwa kwezimali kokuthengiselana ngesikweletu
Inhlangano yomsebenzi wenhlangano encane
Inhlangano yomsebenzi wama-MFIs
Inhlangano yomsebenzi wezinhlangano zezimali ezincane
Uhlelo lokukhokha lwama-MFIs
Izinhlelo zezinhlangano zezimali ezincane
Uhlelo lokubalwa kwezikweletu nezikweletu
Uhlelo lokubalwa kwemali mboleko
Uhlelo lokubalwa kwemali yokukhokhelwa kwemali mboleko
Uhlelo lwamakhasimende esikhungo sesikweletu
Uhlelo lokulawulwa kwamakhredithi
Uhlelo lokulawulwa kwama-MFIs
Uhlelo lokubambisana kwezikweletu
Uhlelo lwamabhizinisi wesikweletu
Uhlelo lwezikhungo zezikweletu
Uhlelo lwezezimali namakhredithi
Uhlelo lokusatshalaliswa kwezezimali nemali kumakhredithi
Uhlelo lwabathengisi bemalimboleko
Uhlelo lwama-microloans accounting
Isoftware yokubalwa kwamakhredithi
Isoftware yokubambisana kwezikweletu
Isoftware yezikhungo zezikweletu
Isoftware yokubalwa kwemali
Isoftware yezinhlangano ezincane
Isoftware yenhlangano yamabhizinisi amancane
Amaspredishithi ezikhungo zezikweletu
Isistimu yokubambisana kwezikweletu
Uhlelo lokuhlelwa kwemali emincane
Uhlelo lwemali yesikweletu